Jubbaland oo xal ka Gaartay khilaaf kala Dhaxeeyay Siyaasiyiinta G.Gedo – Radio Daljir
Nofeembar 8, 2015 8:01 b 0
November 08, 2015 (Daljir) — Magaalada Garbahaaray waxaa markii ugu horaysay laga taagay Calanka Jubbaland, kadib markii khilaaf ka dhexjiray Siyaasiyiin kasoo jeeda Geddo iyo maamulka Jubbaland uu heshiis ka gaaray Fartaag.
Mudo lixdan cisho ah oo uu kusugnaa sii haya madaxweyne ku xigeenka kowaad ee maamulka Jubbaland Cabdullaahi Shiikh Ismaaciil Fartaag ayaa heshiis lagu gaaray in shir lagu dhamay nayo khilaafka lagu qabto dhawaan Kismaayo.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa suluugay in xilal ay hayeen laga qaaday,iyagoona kuwa kale arimo kale ku khilaafeen dowladda,balse Fartaag ayaa sheegay in dowladdu diyaar u tahay in xal laga gaaro khilaafka garbahaaray.
Gudoomiye ku xigeenka kowaad ee gobolka Geddo Cabdiraxman Cabdullaahi Aadan Bakaal oo la hadlay ayaa sheegay in heshiis lagu gaaray in khilaafka lagu xaliyo wada hadal lagu qabanayo Kismaayo’waxaa uuna tilmaamay in Garbahaaray markii ugu horaysay laga taagay Calanka Jubbaland.
Bakaal ayaa tilmaamay in Shir looga hadlayo hormarka Garbahaaray manta lagu qabanayo magaalada waxaana ka qayb galaya shirka Fartaag Siyaasiyiinta Geddo iyo maamulka Cusub ee gobolka.